YEYINTNGE(CANADA): တပ်မတော်ကိုတကယ်ကောင်းစေချင်ရင် ၂၅ ရာခိုင်နုန်းကအဖွဲ့တွေအားရင်ငိုက်မနေဖို့လိုတယ်၊
တပ်မတော်ကိုတကယ်ကောင်းစေချင်ရင် ၂၅ ရာခိုင်နုန်းကအဖွဲ့တွေအားရင်ငိုက်မနေဖို့လိုတယ်၊
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်းအခြေအနေများကို အခုနေပြည်တော်(၄)နေရာမဲရရှိခြင်း၊ တပ်မ၁၀၁ မဲရုံအခြေအနေနှင့်တပ်နယ်မြို့များရဲ့မဲအခြေအနေများကသက်သေခံနေပါတယ်၊ ထပ်ပြီးပွင့်လင်းရမည်ဆိုပါက၊"တပ်မတော်သားမိသားစုများအားလုံးပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုမထောက်ခံပါ" ဟူသောအဖြေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားပါစေတွေ့နိုင်ပါတယ်၊
အမေစုက အခြေခံဥပဒေကိုပြင်မည် ဆိုသောစကားနဲ့တပ်မတော်နေ့တွင်ကာချုပ်က (အခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ရမည်)ဆိုသောစကားဆက်စပ်မှုရှိတာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်၊
ရွေးကောက်ခံမဟုတ်သောတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
လွှတ်တော်မှာတွေ့နေရတာကတပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံစားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်စုတ်ပြတ်သတ်နေတာကအစသိသိကြီးနဲ့ ထပြီးမတင်ပြရဲတဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသောကျောက်ရုပ်တွေ......၊
အဲဒီတော့....အမေစု ဒါမှမဟုတ်...ဒီချုပ်ကအမတ်တစ်ဦးဦးက..အားလုံးသိနေတဲ့လက်ရှိတပ်ရင်းတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အောက်ခြေအရာရှိရဲဘော်တွေရဲ့ တကယ်ကြပ်တည်းမှု၊ရပိုင်ခွင့်ညံ့ဖျဉ်းမှု၊ ဇာတ်တူသားစားမှုတွေကို ဇာတ်စုံခင်းပြီးအဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌကိုတင်ပြခဲ့သည်ရှိသော်.....
အာက်ခြေကကြပ်တည်းနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုထိန်းရခက်လာမယ်၊ရှေ့တန်းမှာပြသနာတွေဖြစ်လာမယ်၊နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဝင်လာလို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေများလာရင် လူငယ်ထုထဲမှာဖွတ်တက်နေတဲ့ရဲဘော်ဘ၀အရာရှိငယ်ဘ၀တွေကိုပိုပြီးခါးသီးသွားပြီးစိတ်ဝင်စားမှုပိုနည်းသွားလိမ့်မယ်၊စစ်တပ်ထဲကိုဝင်မဲ့သူတွေပိုနည်းသွားမယ်၊စစ်တပ်မှာသင်တန်းဆိုလို့ဗိုလ်သင်တန်းတွေပဲကျန်လိမ့်မယ်၊
အဲဒီတော့ကိုယ့်တပ်မတော်ကိုတကယ်ကောင်းစေချင်ရင် ၂၅ ရာခိုင်နုန်းကအဖွဲ့တွေအားရင်ငိုက်မနေဖို့လိုတယ်၊
၊ဒီမိုအဖွဲ့တွေကိုမဲမနေပဲနဲ့ ဆွေးမြေ့နေတဲ့ကိုယ်နင်းထားတဲ့ကိုယ့်လှေခါးထစ်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ငုံ့ကြည့်ပြီးလုပ်သင့်တာလုပ်တာကမှ......ကိုယ့်တပ်မတော်ရဲ့ အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့ ကွိုင်ကြီးတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါကြောင်း...........
(စစ်တပ်လက်ရှိအခြေအနေ စားဝတ်နေရေးနဲ့ ၁၉၈၀ လောက်က အောက်ခြေအဆင့်စားဝတ်နေရေး ရပိုင်ခွင့် ပေးတဲ့ဆန်ကအစ၊ပဲကအစ၊အဆင်တန်ဆာတွေရဲ့အရည်အသွေးကအစ ကြည့်လိုက်ပါ၊ရဲဘော်တွေရဲ့အရည်အချင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမထည်းပြောသေးပါဘူးနော်)သူများနိုင်ငံတပ်မတော်တွေနဲ့မနိုင်းပါဘူး၊ တို့..ဘကြီးတွေရဲဘော်ခေတ်ကတော့ ရှေ့တန်းမှာရန်သူကိုလချီရင်ဆိုင်နေရလဲ နောက်တန်းကမိန်းမရဲ့စားဝတ်နေရေးမပူပေါင်၊ ရန်သူကိုရင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်၊ ခုဟာကတော့ ..ရှေ့တန်းကိုလစာနည်းနည်းပါလာပါ့မလားရိက္ခာပဲကပိုးထိုးမလား၊စိုငွေကများပါ့မလား၊ဈေးကားအမြဲပျက်နေလို့ ဆိုင်ကယ်ငှားရင်ငွေကကျန်မလား၊ ရိက္ခာဆန်ကကွဲနေလို့အပြင်မှာလဲစားလို့ရပါ့မလား၊အဆင့်မမှီတဲ့ယူနီဖေါင်းပြဲနေလို့အသစ်ဝယ်ဖို့ငွေကျန်ပါ့မလား၊မိန်းမကစတိုးမင်းဆီမှာပဲရောက်ရောက်နေမလား.....ဂျီအီးကဆောက်တဲ့လိုင်းခန်းကြမ်းပေါက်ကျွံနေလို့ကလေးတွေထိမှာစိုးလို့ဝါးဝယ်ခင်းရဖို့ပိုက်ဆံရှိပါ့မလား၊ထောက်ပို့ကရတဲ့ဆီအာလူးရောနေလား၊ကလေးကျောင်းစရိတ်လောက်ပါ့မလား၊....ပြောလိုတာကတော့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်၂၅ ရာခိုင်နုန်းကသူ့အလုပ်သူလုပ်ဖို့လိုတယ်.............မလုပ်လို့သူများလုပ်မှေ-ွးအကြီးလှည်းနင်းသလိုထောက်ခံရမလိုကန့်ကွက်ရမလို၊....တိုက်ပွဲကျတဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေအတွက်ပဲလား...ကျန်တာတွေ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေက perfect ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ကြပါသလား....ရင်လဲ ခေတ်မှီတိုးတက်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ၀တ်စုံ၊ရိက္ခာကအစ အဆောက်အဦးတွေ infrastructure အကုန်လုံးကို အာဆီယံအဆင့်လောက်ကိုပဲ မီမမှီ QC စစ် လိုက်ပေါ့...ကြားဖူးတာကအရင်တုန်းကတပ်မတော်စက်ရုံကထုတ်တဲ့ product တွေကို အရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေက Quality ကောင်းလို့ဝယ်စုကြတယ်သုံးကြတယ်၊ အခု တပ်မတော်ပစ္စည်း ရဲတောင်သုံးလို့လား....၊တကယ်အောက်ခြေကရဲဘော်တွေတပ်မတော်သားတွေ( facebook သုံးနိုင်တဲ့သူမပါ) နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ဘူးပါတယ်၊အစိုးရသစ်တက်ပြီးမှအခုပြောတာတွေကိုကာချုပ်ကပြောင်းလည်းလိုက်ရင်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ၊ပြောင်းမပြောင်းသိတဲ့သူကသိပါတယ်၊
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/04/2012
Today market premium is 2~3 million for "No go Kachin state(Black area)". Meaning is Army officer has to pay cash as under table if he doesn't want to go Kachin border where fighting is going on.
All officers know they don't have ability to fight KIA.
Many officer were killed last year.
တပ်မတော်ကိုတကယ်ကောင်းစေချင်ရင် ၂၅ ရာခိုင်နုန်းကအဖွ...
"ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့ အစည်းအကြော...
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ...